China TDY-G-1 Radiolucent Stainless Steel Electric-Hydraulie NA latabatra ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy Neurosurgery | Wanyu
Ny fonony rehetra dia vita amin'ny vy vy 304, mora diovina sy tsy misy otrikaina.
Ny fitaovana fibre fampitana hazavana avo lenta dia mety amin'ny fampiasana sinar-X.
Ny famolavolana kidoro mihalalaka dia ahafahan'ny marary mandry eo ambonin'ny latabatra fandidiana amin'ny fomba milamina kokoa.
TDY-G-1 latabatra fandidiana elektro-hydraulic dia mampiasa rafitra fanaraha-maso mandroso, valves electromagnetic azo itokisana sy paompin-tsolika avy any Taiwan, miantoka fahombiazana mangina sy milamina.
Ny haavon'ny ambany indrindra amin'ity latabatra elektrika-hydraulic OR ity dia azo ahitsy amin'ny 520mm, tena mety amin'ny fandidiana ati-doha sy fandidiana maso. Ny takelaka loaka azo esorina dia afaka mahafeno ny fampiasana ny latabatra fandidiana miaraka amin'ny vatan-doha fanapahana.
2. Double lovia lohan'ny roa
Ny takelaka lohan-droa miaraka amin'ity latabatra Electric-hydraulic OR latabatra ity dia afaka manitsy malalaka ny haavon'ny lohan-doha, ahafahan'ny marary manana zoro lohany ahazoana aina rehefa manao asa amin'ny toerana samihafa.
3.Built-ny voa BRidge
Ny tetezana voa-namboarina dia vita amin'ny fitaovana PMMA matanjaka be, manatratra toerana maro haingana, ary mamonjy ny fotoana fandidiana.
4. Batterie azo averina ao anaty
Izy io dia miaraka amin'ny bateria azo havaozina avo lenta, izay afaka mifanaraka amin'ny filan'ny fiasan'ny 50. Mandritra izany fotoana izany dia manana famatsian-herinaratra AC hanome herinaratra elektrika hiantohana ny fiarovana azo antoka.
5.M freins mekanika
Ny freins pedal mekanika dia haingana, mety, azo antoka ary azo itokisana
Model item TDY-G-1 Herinaratra-Hydraulika OR Latabatra
Ny halava sy ny sakany 2080mm * 550mm
Fiakarana (ambony sy ambany) 820mm / 520mm
Takelaka miverina (ambony sy ambany) 80 ° / 20 °
Fiakarana amin'ny tetezana voa 110mm
8 Long fixing Clamp Tsiroaroa 1
Toerana ambany indrindra
Takelaka lohan-doha miaraka
Manaraka: TDY-Y-2 Latabatra fandidiana hopitaly elektrika-hydraulic